January 2018 – မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း
ဆံပင်တိုလေးနဲ့ တစ်မျိုးလေး ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ရွှေသမီး
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေး ရွှေသမီးကတော့ ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ မျက်နှာအလှလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်ပါ။ အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန် ဖတ်ရှင်တွေနဲ့ အမြဲမြင်နေကျဖြစ်တဲ့ ရွှေသမီးကိုတော့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေကိုတော့ ရွှေသမီးက သူမရဲ့ FB မှာ တင်ထားတာပါ။ ပုံထဲမှာတော့ ရွှေသမီးက ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ [...]
ဖေ့စ်ဘွက်မှာ လူချစ်လူခင် အင်မတန်များတဲ့ ချစ်သုဝေရဲ့ သမီးလေးတွေထဲက မေမြန်မာခေတ်လေးက လမ်းလျှောက်နိုင်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှု အထူးခံရတဲ့ သမီးလေးတွေရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်အသစ်လေးတွေ ချစ်သုဝေက တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမွှာသမီးလေးနှစ်ယောက်ဟာ ခွဲမရအောင်တူပြီး သူတို့ရဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တိုင်း လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြီး အားပေးကြည့်ရှုခံရလေ့ရှိပါတယ်။ မနေ့ (ဇန်နဝါရီလ [...]
သမီးလေးကို လက်သည်းနီ ဆိုးပေးနေတဲ့ ဖေဖေနိုင်းနိုင်း
လူတိုင်းအားကျရလောက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး မိသားစုအသိုက်အမြုံလေးပိုင်ဆိုင်ထားသူကတော့ နိုင်ငံကျော်မင်းသား နိုင်းနိုင်းပါပဲ။ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာ ရပ်တည်နေသူ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် နိုင်နိုင်းကတော့ တစ်ဖက်မှာလည်း သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောမှာတော့ ဇနီးဖြစ်သူစန္ဒီချို နဲ့ သားသမီးတွေရှိရာ အမေရိကကို ပြန်လိုက်သွားတာ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီဖြစ်ပြီး မိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီး အချိန်ဖြုန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်မှာ [...]
အပြင်ထွက်ရင်တင်ပါးပဲ ကြည့်ခံရတာများတော့ အချို့မိန်းကလေးတွေ မနာလိုတာတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့
လက်ရှိ Body နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် ပန်းချီ လက်မောင်းကြီးတယ် လက်မောင်းကြီးတော့လက်ပြတ်တွေဘာတွေဝတ်ရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ အဓိကကတော့အပေါ်ပိုင်းနည်းနည်းကြီးတယ် အဲ့တာကိုဝိတ်ချဖို့တော့လိုတယ် ဒါပေမဲ့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲပန်းချီဖြစ်ချင်တယ်။ ၀ိတ်နည်းနည်းချချဖို့တော့လိုတယ်ပန်းချီခုပေါင် ၁၅၇ ရှိတယ် ပေါင် ၁၄၅ လောက်တော့ချဖို့လိုတယ်။ တော်တော်များများက ပန်းချီအပြင်သွားရင် တင်ပါးပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးကြည့်ကြတယ် တစ်ချို့မိန်းကလေးကျတော့လည်း ယောင်္ကျားလေးတွေ ကြည့်ပါ စိတ်ဝင်စားပါများရင် [...]
မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့ ရဲမင်းပိုင်
မြန်မာဗွီဒီယိုပရိတ်သတ် အားပေးမှု အများအပြားရရှိခဲ့တဲ့ ဖိုက်တင်မင်းသား ရဲမင်းပိုင်တစ်ယောက်ကတော့ညမြန်မာပြည်နဲ့ ၁၄ နှစ်တာ ဝေးကွာခဲ့ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဒီနေ့ပဲ ပြန်လယ်ရောက်ရှိလာပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဟောင်ကောင်မှာ လေယာဉ်ကြာခဲ့တာကြောင့် တစ်ရက်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ (ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်) ညနေ ၄ နာရီခန့်ကပဲ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို [...]
မိုးယုစံရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ လွင်မိုး
အကယ်ဒမီလွင်မိုးကတော့ သူရဲ့ငယ်ငယ်ကအမှတ်တရရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေထားပါတယ်။ဒီပုံထဲမှာတော့ မင်းသမီးမိုးယုစံရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူစွမ်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။လွင်မိုးကတော့ သူ့ကိုချီးကျူးစကားတွေနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံတွေကို အမှတ်တရပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံလေးဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကတော့အခုပုံစံနဲ့ တော်တော်လေးကွာခြားနေပါတယ်။လွင်မိုးကတော့ သူရဲ့ဖေ့ဘုတ်မှာအခုလိုပဲရေးသားထားခဲ့ပါတယ် “၂၀၀၃ ခုနှစ်ကပုဂံ bbb စားသောက်ဆိုင်မှာ ဓာတ်ပုံ တွဲ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ခလေးအရွယ်လူငယ်တစ်ဦးဟာ ယနေ့ [...]
မင်းသွေးတစ်ယောက် နောက်ကား ကျော်တတ်တော့မှာလား..?
မင်းသွေးတစ်ယောက် နောက်ကား ကျော်တတ်တော့မှာလား..? သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော နေတိုးနဲ့ မင်းသွေးတို့ကတော့ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ ဆယ်လီညီအစ်ကို တွေပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးကလည်း အနုပညာလောကမှာ သူ့တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့ သီးခြားရပ်တည်နေသူတွေပါ။ အစ်ကိုဖြစ်သူ နေတိုးကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ အရမ်းကိုငြိမ်နေတာမို့ နေတိုး တစ်ယောက် [...]
“ဇာတ်ကားထဲမှာသာမတည့်ပေမယ့် အပြင်မှာ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ သူတို့ “
လက်တလော တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရုံတင်ပြသနေတဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရရှိနေပါတယ်။ ဥပါယ်တံမျဉ်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကတော့ တောင်ကြီးမြို့မှာ ပရိသတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ရောက်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ တောင်ကြီး ရုပ်ရှင်ရုံမှာ သူတို့ကိုကြိုဆိုကြတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း တခဲနက်များပြားလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးကာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဓာတ်ပုံတွေအတူရိုက်ကူးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် [...]